Iziphumo ebezingalindelekanga ze-Spironolactone kunye nendlela yokuzikhusela - Ulwazi Lweziyobisi | Eyenkanga 2021
Iindaba, Impilo Inkampani, Iindaba Imidlalo Enzima Ulwazi Lweziyobisi, Imfundo Yezempilo Inkampani, Imfundo Yezempilo Ukuphuma Ulwazi Lweziyobisi Imfundo Yezempilo Cinezela Inkampani, Ulwazi Lweziyobisi Imfundo Yezempilo, Iindaba Inkampani, Ukuphuma Ulwazi Lweziyobisi, Iindaba Iziyobisi Vs. Umhlobo Uluntu, Inkampani
Eyona >> Ulwazi Lweziyobisi >> Iziphumo ebezingalindelekanga ze-Spironolactone kunye nendlela yokuzikhusela
Iziphumo ebezingalindelekanga zeSpironolactone | Amanqanaba ePotassium | Utshintsho lobunzima | Iziphumo ebezingalindelekanga ngokweemvakalelo | Zide kangakanani iziphumo ebezingalindelekanga? | Izilumkiso | Unxibelelwano | Ungaziphepha njani iziphumo ebezingalindelekanga
I-Spironolactone (amagama e-brand: i-Aldactone kunye neCaroSpir) yi-potassium-sparing diuretic (ipilisi yamanzi) esetyenziselwa ukunyanga ukungaphumeleli kwentliziyo, uxinzelelo lwegazi (uxinzelelo lwegazi), i-edema (ukugcinwa kwamanzi) okunxulunyaniswa nesibindi sokuqina kwesibindi okanye iingxaki zezintso, kunye ne-hyperaldosteronism, Ukugqitha kwehormone aldosterone enokubangela uxinzelelo lwegazi oluphezulu.
I-Spironolactone ikakhulu ichaphazela izintso, inyusa ukupheliswa kwamanzi kunye nesodiyam kodwa inefuthe elichasene ne-potassium. Ukunciphisa amanzi kunye ne-sodium kunceda ukunciphisa uxinzelelo lwegazi kubantu abanexinzelelo lwegazi okanye i-hyperaldosteronism kwaye kunceda ukunciphisa umthamo wamanzi kubantu abane-edema. Ukungaphumeleli kwentliziyo, i-spironolactone inceda ukunqanda ukubola kunye nokulungiswa kwakhona entliziyweni kunye nokuphucula ukusebenza kwentliziyo. Njengazo zonke i-diuretics, nangona kunjalo, i-spironolactone isenokungakulungeli wonke umntu. Iziphumo ebezingalindelekanga, iimeko zonyango esele zikho, kunye nokudibana kweziyobisi kunokufuna ulawulo ngononophelo.
ZIQHELEKILEYO: Funda ngakumbi malunga ne-spironolactone | Fumana izaphulelo zespironolactone
Iziphumo eziqhelekileyo ezichaphazelekayo ze-spironolactone
Iziphumo eziqhelekileyo ezichaphazelekayo ze-spironolactone zi:
Ukwandiswa kwebele okanye ukudumba (gynecomastia)
Amanqanaba aphakamileyo e-potassium egazini (hyperkalemia)
Ukungasebenzi kakuhle kwe-Erectile
Izitenxo zokuya exesheni
Iintlungu zesisu okanye iicramps
Iziphumo ebezingalindelekanga ezimandundu zespironolactone
I-Spironolactone ineziphumo ebezingalindelekanga ezininzi:
Ihyperkalemia enamandla: I-Spironolactone inciphisa ukupheliswa komzimba we-potassium, ibangele amanqanaba e-potassium egazi anyuke. Amanqanaba ePotassium aphezulu kakhulu (i-hyperkalemia) anokuchaphazela intliziyo, ekhokelela ekubetheni iintliziyo ngendlela engaqhelekanga (arrhythmias) kwaye, kwiimeko ezinzima, isifo sentliziyo.
Ukungalingani kwe-Electrolyte: Ngaphandle kokunyusa amanqanaba e-potassium, i-spironolactone yehlisa amanqanaba ezinye ii-electrolyte ezinje ngesodiyam, nemagniziyam, kunye necalcium. Kumanqanaba asezantsi kakhulu, oku kungalingani kwe-electrolyte kunokuba yingozi.
Ukunyusa umsebenzi wezintso: Ukwehla kwamanzi kunye nesodium emzimbeni kunokukhokelela ekuphelelweni ngamanzi emzimbeni, umthamo wegazi ophantsi, kwaye ekugqibeleni kunciphise amandla eentso ukuba asebenze. Abantu abathatha iintlobo ezithile zamayeza, ezinjei-angiotensin-yokuguqula i-enzyme(ACE) inhibitors okanyeii-angiotensin II receptor blockers (ii-ARBs),zisengozini yokuphuhliswa kweengxaki zezintso ngelixa zithatha i-spironolactone.
Ukulimala kwesibindi (hepatotoxicity): Nangona kunqabile, abanye abaguli banamava hepatitis exubeneyo , imeko apho ukonzakala kweseli yesibindi kudityaniswa nokuxhasa inyongo esibindini.
Iingxaki zeeseli zegazi: Omabini amanqanaba asezantsi eeseli ezimhlophe kunye neeplatelet ezisezantsi ziye zaxelwa kwizigulana ezithatha i-spironolactone, iphakamisa umngcipheko wosulelo okanye iziqendu ezophayo.
Impendulo ye-Hypersensitivity: Ukuphendula ngokuthe ngqo njengokurhawuzelela, irhashalala, okanye umkhuhlane, okanye iimpendulo ezomeleleyo, ezinje nge-anaphylaxis (isiyezi okanye ukuphefumla nzima), kunokwenzeka.
I-potassium ephakanyisiweyo yiphumo eliqhelekileyo le-spironolactone, kodwa iziganeko azinqunywanga. Amathuba ophakamileyo we-potassium yegazi aya kuxhomekeka kubudala, ukusebenza kwezintso, ezinye iimeko zonyango, kunye nezinye iziyobisi ezithathwayo. Kwi isifundo esiqhekezayo I-spironolactone kunyango lokusilela kwentliziyo, imeko yehyperkalemia ebukhali yayiyi-2% kwabo bathatha i-spironolactone ngokuchasene ne-1% yolawulo, okanye iqela le-placebo. Ukusukela olo phononongo, imeko yehyperkalemia ebukhali phakathi kwezigulana ezisilela kwentliziyo lonyuke kakhulu . Eyona nto iphambili kukuba amanqanaba e-potassium ayakudinga ukubekwa esweni, ngakumbi kubantu abadala, abaneengxaki zezintso, abanesifo seswekile, okanye abathatha amanye amayeza aphakamisa umngcipheko wokuphucula i-potassium ephezulu.
Ukuba kukho naziphi na iimpawu okanye iimpawu ze-potassium ephezulu yegazi ezinamava ngelixa uthatha i-spironolactone, fumana unyango kwangoko. Ezi mpawu zinokubandakanya ukubuthathaka kwezihlunu, ukudinwa, isicaphucaphu, ukugabha, ukurhawuzelela, ukuphefumla nzima, ukubetha kwentliziyo, ukubetha kwentliziyo ngendlela engaqhelekanga, kunye nentlungu esifubeni.
Utshintsho lobunzima aluyomphumo oqhelekileyo we-spironolactone. Njenge-diuretic, i-spironolactone inyusa ukupheliswa komzimba komzimba, kunciphise okwethutyana ubunzima bomzimba. Oku akunjalo, nangona kunjalo, ukwehla kobunzima ngokwamafutha okanye ezinye izicwili zomzimba. Izifundo kwabasetyhini abane-polycystic ovary syndrome cebisa ukuba i-spironolactone inokuphucula imetabolism ye-carbohydrate, kodwa hayi kakhulu.
Iziphumo ebezingalindelekanga ngokweemvakalelo
Utshintsho lweemvakalelo aludweliswanga njengempembelelo yecala kwi-FDA-evunyiweyo yokumisela ulwazi lwe-spironolactone, njengoko kufunyenwe kwi Isalathiso seDijithali yoMgcini . Okwangoku, abanye abantu abathatha i-spironolactone bane-self-ingxelo yoxinzelelo kunye noxinzelelo kwiiforamu zonyango ze-Intanethi. Ngaphandle kwezifundo, nangona kunjalo, umbuzo uhlala uvulekile.
Nangona kunjalo, i-spironolactone inokubangela utshintsho kwi-pH yegazi, ibangele nokuba yi-acidosis (i-asidi eninzi) okanye i-alkalosis (i-asidi encinci). Uphando lubonisa ukuba uhlaselo loloyiko olungakhuselekanga kubantu esele bethambekele kuhlaselo lokoyika ngamanye amaxesha lunokubangelwa kukungalingani kwesiseko seasidi.
Zithatha ixesha elingakanani iziphumo ebezingalindelekanga ze-spironolactone?
Uninzi lweziphumo ebezingalindelekanga eziqhelekileyo ze-spironolactone zezokwexeshana kwaye ziya kuphela xa iyeza liphelisiwe. Nangona kunjalo, i-spironolactone's metabolites esebenzayo zingagungqi ixesha elide emzimbeni , kungathatha usuku okanye nangaphezulu ukuba ezinye iziphumo ebezingalindelekanga zehle okwexeshana. Ezinye iziphumo ebezingalindelekanga, ezinjengokungalingani okuncinci kwe-electrolyte (kubandakanya i-hyperkalemia), kunokuthatha ixesha elide ukuyisombulula. Ukungalingani okukhulu kwe-electrolyte kuya kufuna ukutshintshwa kwe-electrolyte ye-IV kwiklinikhi. Ukubalwa kweeseli ezimhlophe ezisezantsi, ukubala kweeplatelet eziphantsi, kunye neempendulo ezinobungozi kunokuthatha iintsuku ukusombulula. Ukulimala kwesibindi kunye nezintso okubangelwa ziziyobisi kunokutshintsha kube lixesha elide okanye kubomi bempilo.
Spironolactone Izimo kunye nezilumkiso
Ukusetyenziswa kwexesha elide kwe-spironolactone ubukhulu becala kuthintelwe iimeko zonyango ezinobuzaza, ke izibonelelo ze-spironolactone zihlala zigqitha kumngcipheko. Abanye abantu abaneemeko ezithile zonyango, ezo ngozi zinokuba phezulu kakhulu ukuba zingathuthuzelwa.
I-Spironolactone iyaphikiswa kubantu abane:
Amanqanaba aphezulu e-potassium egazini labo
Eyaziwayo hypersensitivity ukuba ichiza
Isifo i-Addison, okanye ukungabikho kwe-adrenal, yimeko yonyango enokuthi ngamanye amaxesha ivelise ukusilela kwe-aldosterone, i-hormone eveliswa ngamadlala e-adrenal alawula ukupheliswa kwamanzi kunye nesodiyamu kumchamo. Ngenxa yokuba i-spironolactone ibhloka i-aldosterone, inika i-spironolactone kumntu one-insufficiency ye-adrenal engozini enokuba yingozi kwi-potassium yegazi kunye noxinzelelo lwegazi.
Abanye abantu banokunikwa i-spironolactone kodwa banokuba neemeko zonyango ezifuna ukubekwa esweni kunye notshintsho olunokwenzeka kunyango. Oku kubandakanya:
Umthamo wegazi eliphantsi
I-spironolactone overdose inokubulala, kodwa idosi ebulalayo ephakathi iphezulu kakhulu, inkulu kakhulu kunedosi ecetyiswayo ye-400 mg ngosuku. Ukuba kuthathwe i-spironolactone kakhulu, iimpawu ziyafana neziphumo ebezingalindelekanga ze-spironolactone: ukulala, isiyezi, ukudideka kwengqondo, irhashalala yeziyobisi, isicaphucaphu, ukugabha, okanye urhudo. Ukuba kurhanelwa i-spironolactone overdose, yiya kwigumbi likaxakeka.
Ukuphathwa gadalala kunye nokuxhomekeka
I-Spironolactone ayenzi ukuxhomekeka emzimbeni okanye iimpawu zokurhoxa xa iyekile. Nangona kunjalo, i-spironolactone ihlala ihlukunyezwa, ikakhulu ziimbaleki ukufuna ukunciphisa ngokukhawuleza ubunzima okanye imaski izinto ezivaliweyo kumchamo. Ngesi sizathu, i-Arhente ye-Anti-Doping ye-Arhente iyakwalela ukusetyenziswa kwe-spironolactone ziimbaleki ngaphakathi nangaphandle kokhuphiswano.
Ngaphandle kokuba unyango i-edema eqatha ngenxa yesifo sezintso eziqatha , ukhuseleko kunye nokusebenza kokusebenzisa i-spironolactone ebantwaneni akukenziwa. Nangona kunjalo, i-spironolactone isetyenziswa ebantwaneni njengabancinci njengeentsana ukunyanga imeko yelebhile.
Ukukhulelwa kunye nokuncancisa
Ngenxa yokuba i-spironolactone inokuphazamisa umahluko ngokwesini kwimveku eyindoda, i-spironolactone kufuneka ithintelwe ngexesha lokukhulelwa. Nangona kunjalo, uninzi lweemeko zokuphathwa kwe-spironolactone kukwasongela impilo yomntwana ongekazalwa kunye nonina. Abasetyhini abakhulelweyo okanye abacinga ngokukhulelwa kufuneka baxoxe ngomngcipheko kunye nezibonelelo zokuthatha i-spironolactone ngelixa ukhulelwe.
Abasetyhini abancancisayo okanye abaceba ukuncancisa kufuneka babonisane nomboneleli wezempilo ngaphambi kokuba bathathe i-spironolactone.
Emzimbeni, i-spironolactone ityunyiwe, okanye yaphulwe, kwizinto ezahlukeneyo ezinoxanduva lokunyanga kunye neziphumo ezibi zonyango. I-Canrenone yenye yeemetabolites ezibalulekileyo. I-Spironolactone ngokwayo ayikho kubisi lwebele, kodwa i-canrenone ikhona, kodwa ngamanani amancinci kakhulu. Ukhuseleko lwexesha elide lokuveza usana kwezi zixa zincinci alukamiselwa.
I-Spironolactone ingasetyenziselwa ukunyanga abantu abadala kunama-65, kodwa umsebenzi wezintso uya kufuna ukuvavanywa nokubekwa esweni.
I-Spironolactone inokuthathwa kunye okanye ngaphandle kokutya, kodwa ngendlela engaguqukiyo. Soloko uthatha i-spironolactone ngokutya okanye uyithathe ngaphandle kokutya. Ukuthatha i-spironolactone kunye nokutya kukonyusa kakhulu ukufunxwa komzimba kwe-spironolactone kunye noxinaniso lweplasma lwefom esebenzayo. Ngenxa yoko, ukuthatha i-spironolactone kunye nokutya kufana nokuthatha idosi enkulu. Kulungile, ukuba nje ihlala ihambelana imihla ngemihla.
I-Spironolactone inonxibelelwano oluninzi lweziyobisi.
I-Inspra ( eplerenone) —KUQHELEKILEYO: I-Spironolactone kunye ne-eplerenone ngamachiza afanayo. Zombini i-potassium-sparing diuretics, zisebenza ngendlela efanayo, kwaye zisetyenziselwa ukunyanga iimeko ezifanayo zonyango. I-Spironolactone ayisayi kusetyenziswa ne-eplerenone ngenxa yomngcipheko we-hyperkalemia.
EZINYE IZIYOBISI EZIQHELEKILEYO: Amanye amayeza awaze asetyenziswe nge-diuretics okanye i-potassium-sparing diuretics enje nge spironolactone. Inkxalabo esembindini, kwakhona, ipotassium ephezulu yegazi. La machiza abandakanya:
Potassium: Ngenxa yomngcipheko wamanqanaba aphezulu e-potassium, iziyobisi okanye izongezo eziqukethe i-potassium kufuneka zithintelwe.
I-potassium-sparing diuretics: Ukuthintela i-potassium yegazi, i-potassium-sparing diuretics kufuneka isetyenziswe ngononophelo. Ukubeka iliso rhoqo kumanqanaba e-potassium kunokufuneka.
Iziyobisi ezonyusa amanqanaba e-potassium: I-serum potassium ephakanyisiweyo inokwenzeka ngakumbi xa i-spironolactone idityaniswe neziyobisi ezinokubangela ukonyusa amanqanaba e-potassium egazi. Oku kubandakanya i-ACE inhibitors, ii-angiotensin receptor blockers (okanye ii-ARBs), ii-nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAIDs) ezinjenge-aspirin, ibupr okanye fen , kunye ne-naproxen, igazi lincinci heparin , kunye neyeza lokubulala iintsholongwane yesithathu . Ii-NSAIDs zinokunciphisa unyango olusebenzayo lwe-spironolactone.
Iziyobisi ezinciphisa uxinzelelo lwegazi: I-Spironolactone yehlisa uxinzelelo lwegazi kwaye ihlala ichazwa kunye namanye amayeza oxinzelelo lwegazi. Umdibaniso, nangona kunjalo, unomngcipheko omncinci wokunciphisa uxinzelelo lwegazi kakhulu. Amanye amachiza, anjenge-nitrate, amayeza e-hypertension, amayeza e-erectile dysfunction, ii-opioid, i-anti-depressants, kunye neyeza lokuthomalalisa i-psychotherapy linciphisa uxinzelelo lwegazi. Ukujonga uxinzelelo lwegazi kunokufuneka xa iziyobisi eziphantsi koxinzelelo lwegazi zidityanisiwe. Utywala nako kwehlisa uxinzelelo lwegazi. Abantu abathatha i-spironolactone bayacetyiswa ukuba banciphise inani lotywala abaselayo.
Iziyobisi ezonyusa uxinzelelo lwegazi: Iziyobisi ezonyusa uxinzelelo lwegazi ziya kulungisa iziphumo zonyango lwe-spironolactone kuxinzelelo lwegazi. Oku kubandakanya icaffeine, izikhuthazi, iamphetamines, amayeza e-ADHD, iiarhente zokuvuka, amayeza okuphelisa impumlo, amayeza esifuba (ii-bronchodilators), ii-corticosteroids, i-sympathomimetics, kunye namayeza okunciphisa umzimba. La machiza awanqatshelwe, kodwa iidosi okanye unyango lunokufuna ukuguqulwa.
I-Nephrotoxic (eyonzakalisa izintso) iziyobisi: Ezinye iziyobisi zingonakalisa izintso. Umngcipheko uyonyuka xa zidityaniswe ne-diuretic enje nge-spironolactone. Amachiza abalulekileyo e-nephrotoxic abandakanya i-acetaminophen, ii-NSAID, ii-salicylates, aminoglycoside antibiotics, amayeza athile antiviral, amanye amayeza eswekile (i-GLP-1 agonists), kunye nezinye iziyobisi ze-chemotherapy. I-diuretics nayo inokuphazamisa ukupheliswa kwala machiza, iphakamisa ukugxila kwawo egazini kunye nomngcipheko weziphumo zazo ezithile. Amanye ala machiza anokufuna ukuthintelwa, kodwa uninzi luya kufuna ulumkiso kunye nokubeka iliso.
I-Spironolactone ikwonyusa uxinzelelo lwe lithium (yesifo esiyi-bipolar) kunye Yogco (yeengxaki zentliziyo), ukuphakamisa umngcipheko weziphumo ebezingalindelekanga ezivela kula machiza. Umdibaniso unokufuna ukubekwa kweliso rhoqo.
ICholestyramine isetyenziselwa ukunyanga i-cholesterol ephezulu. I-Cholestyramine edityaniswe ne-spironolactone inyusa umngcipheko we-asidi eninzi egazini ngenxa ye-potassium yegazi ephezulu.
Ungayiphepha njani imiphumo emibi ye-spironolactone
Thatha i-spironolactone njengoko kuyalelwe
Thatha idosi njengoko kumiselwe. Musa ukunyusa okanye ukunciphisa idosi. Ukuba ukusebenza kakuhle okanye iziphumo ebezingalindelekanga yingxaki, thetha nomboneleli wezempilo malunga nokulungisa idosi.
Thatha i-spironolactone ngokungaguqukiyo kunye okanye ngaphandle kokutya
Njengamayeza amaninzi amiselweyo, iipilisi ze-spironolactone okanye isisombululo somlomo zingathathwa kunye okanye ngaphandle kokutya. Nokuba kulungile, kodwa qiniseka ukuba uhlala uhlala thatha i-spironolactone ngokutya okanye uhlale ungayithathi ngaphandle. Ukutya kutshintsha kakhulu inani le-spironolactone elenza emzimbeni. I-Spironolactone isebenza ngokugqwesileyo njengeyeza likarhulumente elizinzileyo, ke hlala ungaguquguquki kwindlela ethathwe ngayo.
3. Xelela ugqirha ngazo zonke iimeko zonyango kunye namayeza
Ngenxa yomngcipheko weziphumo ebezingalindelekanga, ugqirha omiselweyo okanye oqeqeshiweyo kwezempilo kufuneka azi ngazo zonke iimeko zonyango kunye namayeza ngaphambi kokumisela i-spironolactone, kubandakanya:
Naziphi na iimeko zonyango, ngakumbi
Amanqanaba aphezulu e-potassium egazini
Onke amayeza, amayeza e-counter-counter, amayeza, kunye namayeza athatyathwayo
4. Gcina lonke utyelelo olulandelayo
Ukunciphisa iziphumo ezibi, ukundwendwela kunye nokuvavanywa kunokufuneka kuhlolwe uxinzelelo lwegazi, ii-electrolyte, ivolumu yegazi, ukusebenza kwezintso, kunye nokusebenza kwesibindi. Olu tyelelo olulandelayo lunokubona imiba ngaphambi kokuba ibe yingxaki enkulu, ke yigcine ngokuthembeka.
5. Kulumkele ukuqhuba okanye ukusebenzisa oomatshini
I-Spironolactone inokubangela ukuba ube nesiyezi kunye nokulala, ke ulumke xa uqhuba, usebenzisa oomatshini, okanye ubandakanyeka kwimisebenzi eyingozi xa uthatha i-spironolactone.
6. Nciphisa ityuwa
Nciphisa ityuwa okanye usebenzise izinto zetyuwa. Iziphumo eziluncedo ze-spironolactone kuxinzelelo lwegazi okanye ukugcinwa kolwelo kuncitshiswa kukutya okuphezulu kwetyuwa.
7. Kuphephe izongezo zepotassium
I-Spironolactone inokubangela i-potassium yegazi ephezulu, imeko enokuba yingozi. Iziphumo ezininzi ze-spironolactone zibangelwa yi-potassium ephezulu. Ngumbono olungileyo ukunqanda izongezo zepotassium xa uthatha i-spironolactone.
8. Musa ukufaka iipilisi endaweni yesisombululo somlomo
Isisombululo somlomo seSpironolactone yahlukile kwezonyango ukusuka kwiipilisi ze-spironolactone. Iidosi ziya kwahluka. Ngaphambi kokutshintsha iifomathi, fumana iyeza elitsha kugqirha okanye kolunye uqeqesho kwezempilo.
IAldactone echaza ulwazi , ILayibrari yeSizwe yezoNyango yase-U.S
ICaroSpir ichaza ulwazi , ILayibrari yeSizwe yezoNyango yase-U.S
Ukusebenza kwexesha elide (iinyanga ezilishumi elinambini) ungenelelo ngoncedo lokulahleka kwesisindo kubafazi abatyebe kakhulu abane-polycystic ovary syndrome: uphononongo olucwangcisiweyo , Ijenali yaMazwe ngaMazwe yezeMpilo yaBasetyhini
Impembelelo yokutya kwi-bioavailability ye-spironolactone , Clinical Pharmacology kunye nonyango
Umxube weHepatitis , IsibindiTox
I-Spironolactone , Epocrates
Isishwankathelo seSpironolactone , ILayibrari yeSizwe ka-US yamayeza
Isishwankathelo seziyobisi zeSpironolactone , Isalathiso sedijithali sePrescriber
I-Spironolactone echaza ulwazi , ILayibrari yeSizwe yezoNyango yase-U.S
Iziphumo ze-spironolactone ekuguleni nasekufeni kwizigulana ezinesifo sentliziyo esomeleleyo , Ijenali eNtsha yaseNgilani yoNyango
Unyango lwe-edema eqatha kubantwana abane-nephrotic syndrome ene-diuretics yodwa-isifundo esinokwenzeka , Ijenali yezonyango ye-American Society of Nephrology
Iindlela ezili-10 eziphezulu zeTi zikunceda ukuba wehlise ubunzima
Ngaba ikhona into endinokuyithatha ukugula kwasekuseni
iswekile yegazi eqhelekileyo yomntwana emva kokutya
ungazisika iipilisi ezifakwe ifilimu kwisiqingatha
Ngaba kukho uhlobo oluqhelekileyo lwe-vyvanse
iyeza elifanelekileyo lokuxinana kunye nomqala obuhlungu
iziphumo ebezingalindelekanga zesicwangciso b zithatha ixesha elingakanani